Venezoela: lany ilay volavolan-dalàna handrindràna ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2010 6:42 GMT
Tamin'ny Alatsinainy 20 Desambra lasa teo, dia nandàny ny volavolan-dalàna izay manome fahefana ireo Mpanatanteraka handrindra ireo zavatra rehetra azo tsidihana ao amin'ny Aterineto any Venezoela ny Parlemanta Venezoeliana. Amin'ny alalan'ny sampan-draharaham-pitantanana, ny CONATEL, dia manana andraikitra hisakana ireo zavatra rehetra mety hifandona amin'ny antoko faha 28 sy 29 ireo ISP mpanome tolotra aterineto rehetra any Venezoela:
Manome vahana sy mahatonga fankahalana sy tsy fifandeferana ara-pinoana, politika, ny tsy fitovian-karazana, amin'ny fanavankavahana na fankahalana vahiny.
Mamporisika na manao dokam-barotra/na manamarina heloka bevava.
Manao fampielezan-kevitra mikasika ny ady.
Manampy trotraka ny fitaintainana eo anivon'ny fiaraha-monina na manakotaba ny filaminam-bahoaka.
mandà tsy manaiky ny fahefan'ny Governemanta.
Mitaona ho amin'ny fifamonoana.
Mamporisika na mampandroso ny fandikàna ny lalàna efa misy.
Mampandroso, manamarina na mamporisika ny fikorontanam-bahoaka
Mampiasa anarana miafina.
Tsy miraharaha ny fahefana ara-dalàna
Araka ny voalazan'ireo mpikambana ao amin'ny kongresy, dia handrindra ny zava-drehetra io lalàna io, ao anatin'izany ny lahatsoratra, sary, feo ary lahatsary, mety hifanipaka amin'ireo zavatra voatanisa etsy ambony. Mandalo amin'ny digam-pitantanana, dia hahazo sazyh enjana ireo ISP izay heveverina fa nandika ny lalàna.
Tamin'ity maraina ity ihany, ny Filoha Venezoeliana Hugo Chávez, dia nanao fanambarana avy amin'ny kaonty twitter-ny fa vao avy namoaka ity lalàna ity hanan-kery izy. Hihatra ity lalàna ity andro iray aorian'ny namoahana azy tao amin'ny Gazety Ofisialy.
Lahatysoratra mifandraika aminy: